bhimphoto: June 2011
दुइ साता बिते । क्यामेरा झिकेका बेला फेरि त्यो अनुहार लेन्सले देखेको छैन । विराटनगरका बसपार्कछेउ , गुद्री र बुधहाट चोकमै कतै स्टीलको लोटा सडकमा 'ट्वाक ट्वाक' पार्दै बटुवाका ध्यान आकृष्ट पार्ने दानावती देखिन्नन् ।
सामान्य घटनामा पनि सडकमा प्रदर्शन नौलो छैन । कहिले प्रहरीका अघि, कहिले प्रशासन । सामान्य ठानेका बेला कुनै जुलुसले बितण्डा गर्छ । त्यसैले अखबारका लागि उपयोगी ठहर हुन वा नहुन् , जुलुसका तस्बिर खिचेकै जाती हुन्छ । यस्तै एउटा दिन थियो, मध्यान्ह १२ बजेको घाममा लालटिन बोकेको जुलुस मोरङको जिल्ला प्रशासन जाँदै गरेको खबर आयो । ।
जुलुस पच्छ्याउँदै प्रशासन पुगियो । मोटरसाइकल पार्किङ गरेर झोलाबाट क्यामेरा झिक्दैगर्दा चर्को स्वरमा एउटी बृद्धाको प्रश्न कानमा ठोक्कियो - 'पत्रकार छी ?' हो भन्ने संकेत मिलेपछि भनिन् 'पहिने एकरा खिच । पत्रिका मे निकाल ।' उनका भाषामा आक्रोश, निराशा र आदेशका मिश्रति भाव थिए । नजिकै भुइँमा देखाइन । त्यहाँ उनकी करीव दुइ/अढाइ फुटकी छोरी थिइन । टाउको र जीउ एकै ठाउ डल्लो परेजस्तो देखिने । कतिपय जुलुसको बानी पत्रकारले फोटो खिच्लान भनेर पर्खिरहने हुँदैन । खिच्ने बेला बितेपछि फेरि पाइदैन । मैले एकपटक जुलुसतिर हेरेँ, अनि फेरि ती बृद्धाकी छोरीतिर । लगालग दुइ/तीन फ्रेम उनकी छोरीको तस्बिर खिचेर जुलुसतिर लम्किएँ ।
त्यो साता विराटनगरको ठाकुरवाडी रोडस्थित एक ज्वेलरीमा चोरी भएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले समातेका विराटनगर १७ का कबाडी व्यवसायी रहमत अलि (३४) लाई चार दिनपछि छाडेको रहेछ । हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेपनि चोरीमा अलिको संलग्नता पुष्टि हुन नसकेपछि हाजिर जमानीमा उनी छुटे । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका कार्यकर्ताले जुलुस निकालेका थिए । लालटिन उज्याएर नारा लगाउनेका भीडबाट अलि बाहिर आए । उनले पाइन्ट खोलेर देखाए । तीघ्रामा काला-नीला डाम थिए । भने 'मलाइ छोड्नु अगाडि बेस्सरी कुट्यो । नगरेको अपराधमा थुनेर यसरी कुट्न पाइदैन । मैले बाहिर आएर भनेपछि प्रहरीको विरोधमा जुलुस निकालेका हौ ।' यातनाविरूद्धको प्रदर्शनको तस्बिर खिचियो ।
त्यसपछि अघिकी ती बृद्धालाई खोजियो । भेटियो । उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदन दिन आएकी रहिछन् । जुलुसले गेट धर्ना छाडेमात्र उनले पालो पाउने थिइन । त्यस अवधिमा सप्तरीको राजविराज ९ राजदेवी टोलाकी शोभादेवी मुखियाले आफ्नी छोरीका बारेमा बताइन । 'यो जन्मैदेखि यस्तै हो । कम्मरमुनिको भाग जोडिएको छ । हिडडुल गर्न सक्दिन । सहारा चाहिन्छ । ज्वाइँ भनाउदोले बिचल्ली पार्‍यो ।' उनको नाम दानावती रहेछ । अनुहार सामान्य सपाङ्गभन्दा फरक छैन । जिले मुखिया र शोभाका ६ सन्तानमा दानावती र कान्छो भाइ अपांग रहेछन् । उनले बताइन 'हामीले यो छोरीका लागि उपचारमा धेरै हिड्यौ । आर्थिक हैसियत थिएन । तर, उपचार पनि नलाग्ने रहेछ । यो २८ वर्ष लागी होली ।'
सानैदेखि दानावती माग्दै हिड्न थालिन् । कहिले राजविराज, इटहरी र कहिले विराटनगर । मागेर हिड्दा राम्रै दाम जुट्न थाल्यो । विराटनगर आएका बखत उनलाई सघाउने रिक्शावाल घर पुग्यो । र, बिहेको प्रस्ताव राख्यो । 'उसको जेठी स्वास्नी थिइ । तैपनि हामीले छोरीको घर हुन्छ भनेर बिहे गरिदियौ । विराटनगर आएपछि ४० हजार पैसा लिएछ । घरबाट निकाली दिएछ, आमा शोभाले भनिन् 'अहिले हेर्दैन । म कहाँ भन्न जाउ ?' आमासँगको वार्तालाप सुन्दै गरेकी दानावती अलि रिसाइन् । भनिन् 'के हुन्छ पत्रिकामा निकालेर ? पुलिसले कतिपल्ट बोलाएर मिलापत्र गराइ पठाउँछ । एक/दुइ महिना राख्छ । फेरि निकाल्छ । के हुन्छ ?'
धेरै दिनदेखि उनको वास सडकमै थियो । आफै हिड्न नसक्ने उनलाई सहारा भेटे घाम पानीका ओत मिल्थ्यो । नभेटे तिनको सामना गरिआएको सुनाइन् । भनिन् 'म कति दिन भोको बसेकी छु कसलाइ वास्ता छ ?'
कुरा गरिरहँदा मुहारका भाव फेरिन्थे । क्षणमा अनुहार रिसाएको देखिन्थ्यो, क्षणमा प्रसन्नता । कुनैबेला भाव शुन्य । अब उनी मुस्काइन् । 'मैले उसलाई १३ हजारको मोबाइल किनिदिएको थिएँ, फेरि भाव फेरियो । केही रिसाएजस्तो देखियो । मलिन मुहारले उनी बोलिन् 'अहिले मलाई हेर्दैन ।' दानावती र शोभाका तस्बिर लिएपछि अफिस फिरेर राजविराज फोन गरे । त्यहाँका मित्रले जिले मुखियाको घर पुगेर जानकारी पठाउने जवाफ दिए । उनले बिर्सिए शायद, त्यही भएर जानकारी पठाएनन् ।
अहिले कतै फेरि दानावती देखिन्नन् । शायद आमासँगै घर गइन वा अन्तै कतैको सडकमा लोटा 'ट्वाक ट्वाक' पार्दै होलिन् ।
(कान्तिपुर कोसेलीको ०६८ असार ४ गते पूर्वाञ्चल संस्करण पृष्ठमा प्रकाशित)
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 11:40 AM No comments:
content catagory यहाँ यस्तै छ, साभार
विहानै एकजना मलाइ चिन्ने , मैले नचिन्ने भाइको फोन आयो । उनले जनविकास स्कुल आउन डाकेका थिए । मन नलाग्दा नलाग्दै पनि जानु पर्‍यो । उनी लिनै आए । ६ कोठा बनाउन ठेक्का लिएका एक ठेकेदारले विद्यार्थी कुटने गरेका रहेछन् । एउटा फुचेलाई चोट लागेको रहेछ । त्यहा बसियो । जिम्मेवार गुरूहरू भेटिएनन् । अभिभावक, केटाकेटी र मेराज भनिने ठेकेदारका कुरा सुनियो । ठेकेरदारलाई कुनै गम थिएन । उनले भने -यहा टीचर हुदैनन् । म आठवटासम्म क्लास लिन्छु । बदमासी गर्छन् अनि कुटछु पनि ।
अभिभावकले हकारे । ठेकेदार भएर कोठा बनाउने कि पढाउने ? अनि विद्यार्थी कुटने अधिकार कसले दियो ? उ अलि स्वाठ पाराको सुकिलो रहेछ । हच्किएन । भन्यो - गर्छु । जस्ता मेरा केटाकेटी यहाका पनि उस्तै हुन् । उसका जवाफमा मायाको अधिकार जनाउन खोजिएपनि प्रस्तुती हपारेजस्तो थियो । शिक्षकहरू जनगणनामा खटिएछन् । क्लासमा १७ जना आउनुपर्नेमा ९ जना अनुपस्थित भएका रहेछन् । अनि घटना भएको रहेछ । प्रधानाध्यापक भेटिएनन् । उनीसग नभेटी समाचार पुरा हुने भएन । उनको फोन नम्बर टिपेर फिरियो ।
विहान ६ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको भनेको निषेधाज्ञाको अनुभव सडकमा देखिएन । युवा संघ समर्थकले तीनवटा सवारीमा क्षति पुर्‍याइएको सुनियो । एउटा देखियो । जनपथ टोलमा बा५प ७५६ठ नम्बरको मारूती ओम्नी भ्यान जलाइएको रहेछ ।
हिजो राती साढे १० बजे घर फिर्दा मेरो मोटरसाइकल पंचर भएको थियो । वडा प्रहरी परिसरमा छाडेर हिडेको थिए । सञ्चारकर्मी साथी कमल रिमालले घर छाडिदिएका थिए । साधान थिएन । त्यसैले आज म रिक्शामा थिए । बाटामा फोन आयो - युवा संघ अध्यक्ष महेश बस्नेतलाई प्रहरीले तालिम केन्द्रबाट एमाले मोरङको पार्टी कार्यालयमा लगेर छाडेको छ । उनको तस्बिर खिच्नु थियो । रिक्शा त्यता मोडन लगाइयो । खिचियो । उनका आक्रामक कुरा सुनियो । अघि बढियो । बाटामा जलेको भ्यान भेटियो ।
तस्बिर लिएर अघि बढेपछि बाटामा ती भ्यानका गुरूजी भेटिए । सुकुमार सेन दाइले ती गुरूजी चिनाए । लक्ष्मण शर्मा,३०, डराएका रहेछन् । उनले बताए । बाटैमा रोकेर पेट्रोल खन्याएका थिए । आगो लाग्दा लाग्दै निस्केर भागेका रहेछन् । उनको पनि जीउमा पेट्रोल परेको रहेछ । सुन्नेले भने - 'उ यदि उ जवान थिएन । लारेलुरे थियो भने गाडीबाट डढेको कंकाल निस्कन्थ्यो ।' उनी हतास देखिए । उनलाई सान्त्वना दिइयो । ठूलो हिम्मतले ज्यान बचाएका उनलाई कम्पनीले कसो गर्ला थाहा भएन ।
साझ महेश बस्नेत राजधानी फिरे । उनले विराटनगर छाडनुअघि जे जे भने, ती आक्रमक थिए । उनी नागरिक पत्रिका, सम्पादक र पत्रकार महासंघ मोरङका अध्यक्ष विक्रम निरौलाप्रति धेरै रूष्ट थिए । यी दुइका विरूद्ध नै उनले धेरै बोले । अन्तर्वार्ता लिने पत्रकारले पश्न गरेको थिएन । एकोहोरो उनी बोल्दै रहे । निन्दावाद र जिन्दावादका नारा लगाउने समर्थको हुलसगै उनी पार्टी कार्यालय पसेपछि म बाहिर लागे । एक जना भाइले बोलाए । उनले केही बोल्न पत्रकार खोज्दैछन् । अघि उनले बोलेका कुरा सुनेर दोहोरो संवादमा मन लागेन । अनि त्यहा उनलाइ निरन्तर नजिक फलो गरिरहेको एकजना टेलिभिजनकर्मी भाइबाहेक अरू थिएनन् । म बसिन । 'भैगो पर्दैन' भन्दै बाहिरिए ।
काठमाडौं रहदाका कुनै समय एक जना मित्रले कोसेलीको कभर स्टोरीको विषय बस्नेत र वाइसीएलका अध्यक्ष गणेशमान पुनलाई बनाएका थिए । ती मित्रका लागि मैले तस्बिर लिइदिनुपर्ने थियो । सो उनीसगै हिडियो । पुन भेटन गाह्रो भएन । बस्नेतले निकै कुराए । बागबजारको एउटा होटलमा टप फ्लोरमा लगेर भेट दिए । त्यसबेला मलाइ लागेको थियो- यी मान्छे कुनै नामुद गिरोहका नाइके पो हुन् कि । कारण, उनको दलबल । निगरानीका तरिका । कुरा गर्ने शैली ।
प्रहरी-सेना अघिपछि रहे हामीले त्यस्ता मान्छे मन्त्री वा त्यस्तै कुनै खास सरकारी मान्छे ठान्नु स्वभाविक छ । तर, पल्सर बाइक अघिपछि मसलदारहरू देख्ता गिरोहको भान हुनु अस्वभाविक थिएन । उनले बताएका थिए । एक्लै हिडन सकिजो छैन । कारण, भर्खर युथ फोर्सले गतिविधि थालेको थियो । माओवादीको वाइसीएललाई चूनौति दिएका हुनाले सुरक्षामा सतर्क छु भनेका थिए । त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । उनी विपक्षी पार्टीका एउटा बलिया क्याडर ।
अहिले उनकै पार्टीका प्रधानमन्त्री छन् । उनी अहिले झनै बलिया छन् । पत्रकार ढकाल कुटेको आरोप लागेका युथ फोर्स मोरङ संयोजक पर्शुराम बस्नेतलाई उनले संरक्षण दिएका छन् । छापा र टेलिभिजनमा उनका भनाइ आए । निर्दोषलाइ फसाइएको हो । दोष प्रमाणित भएमात्र पर्शुलाई बुझाउने रे । उनै पर्शुका लागि विराटनगर आइपुगेका बस्नेतले यहा सभा गर्न पाएनन् ।
उनले सभा गर्ने भनेका दिन विराटनगरमा सभा, जुलुस, धर्ना गरन् र ५ जनाभन्दा बढि भेला हुन नपाइने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्‍यो । १९ किलोमिटर उत्तर इटहरीमा पनि उनले भेला बोलाउन पाएनन् । समातेर विराटनगर ल्याइयो । जे होस्, उनी छुटे, छुटाइए । सरकारले अनुनय विनय गरेर काठमाडौं बोलायो । गए । उनी विमानस्थल जादा पुर्‍याउन हिडेका झण्डाधारी नाराबाजहरूलाई अफिसको झयालबाटै देखे । समाचार अप्डेट गरियो ।
दुइ साता भएको छ, विराटनगरमा नागरिक दैनिकका संवाददाता खिलानाथ ढकालमाथि आक्रमणको । साथीहरू उनी एमालेसम्बद्ध सञ्चारकर्मीको संगठन प्रेस चौतारीमा आस्थावान हुन् भन्छन् । उनलाइ आक्रमण गरेका आरोपितहरू एमाले कार्यकर्ता नै हुन् ।
त्यस दिन विहान जब रातमा ढकालमाथि आक्रमण भएको सुनियो, एक मनमा लागेको थियो - उनी किन रातमा जसबाट खतरा छ, उही समूहका मान्छेले बोलाउदा गएका होलान् । फेरि लाग्यो, सञ्चारकर्ममा धेरैले स्रोतका माध्यमबाट सूचना लिन्छन् । रात विरात सञ्चारकर्मी हिडछ भने उ कामकै सिलसिलामा धेरैपटक हिडेको हुन्छ । निकै थोरै यस्ता होलान् , जो मजाका लागि रात्री विचरण गर्छन् ।
घटना भइसकेपछि विहान हामी पत्रकार महासंघमा भेला भएका थियौ । आकस्मिक छलफल डाकिएको थियो । दोस्रो दिन, तेस्रो दिन र निरन्तर कुनै न कुनै प्रकारका दोषी पक्राउ अनि कारवाहीमा सरकारको ध्यान खिच्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ ।
दिन बित्दै जादा पनि मुख्य दोषी भनेर आरोप लगाइएका पर्शुराम समातिएका छैनन् । कुनै पनि पार्टीमा बलियो पकड नभएको जनता हुदो हो भने अहिले पक्राउ मात्र होइन, उसलाई बकाउन प्रहरीका अनेक यातनाका सिकार भइसक्थे होलान् । तर, पर्शु बलिया रहेछन् । उनी राजधानी बसेर टेलिभजनलाई अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन् । सरकारलाई चूनौति दिइरहेका छन् । दोष प्रमाणित गर्नसक्ने भए देखाउ भनेर । पत्रकार साच्चै निरीह रहेछन् भनने पनि लाग्छ । अनि दलहरूले मात्र चलाए देशमा प्रजातन्त्र रहन्छ भन्ने कुरामा शंका पनि लाग्छ ।
सक्नेले जे गरेपनि हुने भनेको यही घटनाले देखाएको छ । उनी निर्दोष हुन् भने प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सघाएर आफुलाई साबित गर्न सक्नुपर्ने हो कि भन्ने लाग्छ । तर, जसको सरकार छ । जसले सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका लागि काम गर्छ, उसलाई कसरी त्यही सरकारले समात्न सक्छ ? प्रश्न धेरै छन् । केही नेताका भनाइ पढन मिलेको छ । घटनामा पार्टीलाई मुछेर अतिरञ्जित बनाइयो भनेर । के यो अतिरञ्जित होला त ? आन्दोलनमा गोली लागेर इहलीला सकिएका मान्छेको शवमा पार्टीका झण्डा ओढाइन्छ । अनि सहीद करार दिइन्छ । पार्टी र केही पछि बल पुगे देशैले उसको तस्बिर राख्छ । पार्टीका नेता हुंकार गर्छन् - हाम्रा वीर सहीद फलाना । अनि कुनै कारयकर्ताले बिझयाइ गरे उसको दोष व्यक्तिलाई मात्र जाने हो कि । हाम्रो सामाजिकीकरणको फेरिएका नियम मगजमा पस्दैन । कारण, समाजशास्त्र रूचीकर नलागेर पनि हुनसक्छ ।
आज महेश बस्नेतका कुरा सुनेपछि मलाइ पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाका अध्यक्ष साथी विक्रम निरौलाको व्यक्तिगत सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता लागेको छ । कारण, पत्रकार हतियार बोक्दैन । सुरक्षा गर्ने जमात साथ लिएर पनि हिडदैन । उसका कुरा राज्यले सुन्नुपर्छ । उन नियमका कुरा गर्छ । कानूनी शासनका कुरा गर्छ । चिन्ता र चासो सबैलाई हुनुपर्ने हो । तर, खिलानाथ आक्रमण प्रकरणमा अहिलेसम्म खिला स्वयंको जाहेरी प्रहरीमा पुगेको छैन । पत्रकारका आवरणमा नेता साथीहरूले हिम्मत बढाएर एमालेका जुझारू कार्यकर्ताविरूद्धको आरोपको उजुरी महासंघका तर्फबाट निरौलाजीका नामबाट गएको छ । महासंघको नेतृत्वका नाताले उहाले गर्दिन भन्न मिल्ने ठाउ पनि रहेन । तर, परिस्थिति आज केपी ओलीले श्रीलंकाबाट एउटा टेलिभिजनसँग गरेको कुरा जुझारूलाई अझ बल मिल्ने संकेत गर्छ । जे होस् न्यायका पक्षधर कसैको कुभलो नहोस ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 9:42 PM No comments:
चराका कुरा के लेख्ने ?
गत महिना राजधानीमा एउटा कार्यक्रम मैले सञ्चालन गरेँ । कुरा किताबको थियो । अरू विधा भए के कसो हो तर, किताब पनि 'लाटोकोसेरो' को । त्...
Swallow birds - गौथलीको घर
सिकारी जिवजन्तुबाट ज्यान सुरक्षार्थ नजिक बस्न मन पराउँछन् तर, न हाम्रो नियन्त्रण रुचाउँछन्, न त दिएको खान्छन् । चन्द्रागिरी नगरको...
रहरमा पखेटा लागेपछि
-चित्र पौडेल त्यति बेला म झापाको बिर्तामोडमा नौ कक्षामा पढ्थेँ। काठमाडौँ जाने मौका मिल्यो। लम्कीका यामलाल रसाइलीसँग भेट भयो। उनल...
Bats - चमेरो बिचरो
आ यकरको नयाँ नियमसँग असन्तुष्ट विराटनगरका व्यापारी २०३६ सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई भेटन पुगे । आफ्नो परिचय दिने बे...
पोखराको यौन पर्यटन
उज्यालो शहरमा अँध्यारोको व्यापार -भीम घिमिरे/शिव शर्मा १. सात कक्षामा पढाइ राम्रै थियो । गीत गाउनमा सिपालु पनि थिइन । बाबुका तीन ...
अनि बाटो मोडियो
गत सोमबार । म अहिले पोखरामा छु । एउटा अौपचारिक कार्यक्रमको निम्तो अलि पृथक थियो । मलाई सहकर्मी शिव शर्माले देखाए -'एउटा डाकु साधुको...